ငွေကြေးနှင့်အခွန် | Useful information about life in the USA from USAHello | USAHello
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌, လူတွေကိုဘဏ်မှာသူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံကယ်တင်. ဘဏ်များလည်းလူတွေလူတွေအိမ်တအိမ်သို့မဟုတ်ကားတစ်စီးဝယ်ဖို့ကူညီရန်ချေးငွေများပေးပါ။ ဆက်ဖတ်ရန်
အခွန်သင်မြို့မှပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်ပိုက်ဆံများမှာ, ပြည်နယ်, နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အစိုးရ. နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း, သင်သည်သင်၏အခွန်သတင်းအချက်အလက်အစိုးရမှပေးပို့ရပါမည်, သငျသညျငွေရှာကြဘူးလျှင်ပင်။ ဆက်ဖတ်ရန်
နိုင်ငံတကာကပိုက်ဆံမပို့ရသောအခါများစွာသောရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်. ဘယ်မှာသွားပါရန်နှင့်သင်သည်အဘယ်သို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ဈေးပေါပေါပိုက်ဆံပေးပို့ဖို့လိုတယ်လေ့လာပါ။ ဆက်ဖတ်ရန်
သငျသညျပိုက်ဆံချေးဖို့လိုအပျပါနဲ့? ခရက်ဒစ်နှင့်ငွေထုတ်ချေးပိုက်ဆံချေးဖို့နှစ်ဦးစလုံးနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်. အကြွေးဝယ်ကတ်များအကြောင်းကိုလေ့လာပါ, payday ချေးငွေများနှင့်ငွေချေးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ။ ဆက်ဖတ်ရန်
ဘတ်ဂျက်: ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှုပြဿနာတွေနဲ့ဖြေရှင်းနည်းများဘတ်ဂျက်: ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှုပြဿနာတွေနဲ့ဖြေရှင်းနည်းများ. တစ်ဦးကဒုက္ခသည်ဒုက္ခသည်စခန်းနှင့် America မှာနှစ်ခုစီးပွားရေးစနစ်များကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ခြားနားနေသည်။
သင့်ရဲ့ကလေးတွေနှင့်အတူငါးပျော်စရာအခမဲ့ဖျော်ဖြေရေးစိတ်ကူးများ5 သင့်ရဲ့ကလေးတွေနှင့်အတူရိုးရှင်းသောပျော်စရာဖျော်ဖြေရေးစိတ်ကူးများ. ပျော်ရွှင်ပါစေ, အဘယ်သူမျှမဖြုန်း! သင့်ရဲ့ကလေးများဖျော်ဖြေဖို့ရိုးရှင်းတဲ့အကြံပြုချက်များ. USAHello ။